Munamato wekuporesa uye Kudzivirira kweCoronavirus | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Munamato wekuporesa uye Kudzivirira kweCoronavirus
Ekisodho 15: 26
Akati, "Kana uchiteerera kwazvo inzwi raJehovha Mwari wako, ukaita zvakanaka pamberi pake, ukateerera mirairo yake, ukachengeta mirau yake yose, handingaisi chimwe chezvirwere izvi." pamusoro payo, izvo zvandakauyisa pamusoro pavaIjipita, nekuti ndini Jehovha unokuporesa.
Munguva yakadai, panodiwa isu tese kuisa manzwiro uye misiyano yedu parutivi uye tinamatire nyika iri nani, nyika isina musungo wehutachiona hweCorona. Pasi redu rakakanganisika zvakanyanya nehutachiona, zvakakosha kuti isu titi munamato wekurapa nekudzivirira kweCoronavirus. Mwari ane hanya zvakanyanya nehupenyu hwedu; Zvirongwa zvake hazvisi kuti nyika yose iparadzwe nedenda rinouraya uye risingarapike. Zviripachena kuti iri ibasa radhiabhori nekuti Mwari haamboiti chero chakaipa. Panguva iyo masayendisiti pasi rese ari kushanda achitenderedza wachi mukuda kuti awane mushonga weizvi chirwere zvakakosha kuti isu zvakare tiri padare remweya tiite zvese zvatinogona kuti tisunungure mamiriro acho. Tichangopinda muminamato, kuti isu tibatsirwe nevaya vasina ruzivo nezve hutachiona, zvinoshamisa kuti isu tinyore nezvazvo kuti iwe uzive kuti chinouraya sei kuti iwe uzive kunyengetera nemazvo.
Kupararira kweCoronavirus ndiyo hosha yekupedzisira uye yakaipisisa yakarova nyika, yakaipisisa isati yamboonekwa nenyika. Chakatanga kuwanikwa muWuhan, guta riri muRepublic of China kudzoka muna Zvita 2019 Pakutanga, hutachiona pahwakatanga kuChina, nyika yese yakacheuka maziso asingaoni uye matsi matsi kwazviri, kwete kusvikira yaendeswa kuEurope. , Africa, America uye nevamwe vese.
Mukati memwedzi mitatu, nyika dzinodarika zana dzakabatwa zvakanyanya nehutachiona uye vanhu vanopfuura zviuru zvina vanonzi vafa. Kutya kwedu kunowedzera muAfrica apo hutachiona hunowanda kwazvo munyika dzokumadokero. Uye ikozvino, mitambo yemitambo pasi rese yakaiswa kumiswa nekuda kwehutachiona hunouraya. Zvakare, nzvimbo dzakawanda dzekutengeserana pasi rese dzakamisa bhizinesi nekuda kwekubuda.
Iyo chirwere che coronavirus inozivikanwawo seCOVID-19 inoratidzwa nezviratidzo nyoro. Vanhu vanotapukirwa nechirwere ichi vanogona kuona zvinotevera:
Kuomerwa Kwekufema (Nyaya Dzakadzika)
World Health Organisation (WHO) ichiri kunetsekana kuwana mushonga wehutachiona yakapa mamwe matambiro ekuzvidzivirira pachedu kubva muutachiona.
Verenga matanho Ekudzivirira kweCorona Virus pazasi
Gara uchishambidza maoko ako nesipo uye nemvura, uye shandisa doro-rakagadzirwa ruoko sanitizer.
Chengetedza angangoita 1 & hafu yemamita (mashanu tsoka) chinhambwe pakati pako iwe nechero ani ari kukosora kana kuhotsira.
Vanhu vane kuramba vachikosora kana kutsvanzvadzira vanofanirwa kugara pamba kana kuchengetedza chinhambwe munharaunda, asi vasisangane muchaunga.
Ita shuwa iwe nevanhu vakakukomberedza, tevedza hutsanana hwakanaka hwekufema, zvichireva kuti unofukidza muromo nemhino netaipi kana mune yako ruoko nechepazasi ruoko kana tishu kana iwe uchitsvukisa kana kutsvedza. Wobva warasa zvimedu zvinoshandiswa pakarepo.
Gara kumba kana iwe uchinzwa kusaziva nezviratidzo senge fivha, kukosora, uye kunetseka mukufema. Ndokumbirawo kufonera Medical emergency toll free nhamba yako munyika yako inowanikwa siku nesikati, kuti utungamire. Usaite zvekuzvirapa pachako
Mushure mekunge tazvishongedza neruzivo rwakakwana nezveutachiona, zvakakosha kuti tizive kuti Mwari anogona kuporesa nyika, anogona kubvisa mhedzisiro yeCOVID-19 uye nekudzoreredza rugare zvakare pasi.
Sezvo isu tichidana kuna Mwari muminamato, isu tinofanirwa kutarisa pane zvinotevera nzvimbo uye kutarisira mhinduro dzinokurumidza kubva kuna She.
Kuti Kupararira Kumire
Hutachiona huri kupararira kunge moto wemusango muHarmattan uye kana ukaramba uchidaro, hapana kona yenyika ingaponeswa. Pane kukosha kwekunamata kuti Mwari vanofanirwa kumisa hutachiona kuti husapararire. Sezvo ruzivo rwevarapi vekurapa rwaratidza kuti rwakaipisisa, zvese matanho ekudzivirira kupararira aratidza kubviswa, hazvisi zvenguva here kuti isu tinodzokera kuna Mwari muminamato? Tinonamatira kuti kupararira kwehutachiona kumire, hutachiona hunofanirwa kupera simba. Chiyero chinotapurira hutachiona zvinotyisa, chero hukama nehutachiona hutachiona huchatapurirana. Ndosaka zvisingashamisi, zvava kuita kunge zvisingagadzirisike muEurope kunyanya munyika yeBhora nehumambo emabhizimusi. Mwari munhu mukuru, ane simba pamusoro pezvese, uye nemunamato wedu wekuporesa nekudzivirira kweCoronavirus ucha kukonzera Mwari kumisa pazviri.
Kuti Mwari Vape Varapi Vedu Solution
Zvakare, tichave tichinamatira kuti Mwari vape vanachiremba nemasayendisiti ruzivo uye huchenjeri kuti vauye nekurapa. Kusvika parizvino, hapana kumbove nekugovaniswa kwechokwadi chekrete kune izvo zvingave zvakakonzera hutachiona, yakangobuda kubva kubhuruu. Rugwaro rwakaita kuti tinzwisise kuti pfungwa dzese dzakanaka dzinobva kuna Mwari, tichave tichinamatira kuti Mwari vavape huchenjeri kuti vauye nekurapa.
Kune Iyo Rufu Toll Kuti Imire
Huwandu hwevakafa hwakawedzera kubva kune mumwe kusvika pamusoro pe4000 mukati memwedzi mitatu uye kana hanya ikasatorwa, ichawedzera kupfuura ipapo. Munamato wedu unozotarisawo kumisa huwandu hwevakafa kubva pakuwedzera zvimwe. Hutachiona hwakatanga mune rimwe guta hwatambanudzira kune nyika dzinopfuura zana, huwandu hwevakafa hunofanira kumira, uye hutachiona husati hwatouraya isu tese uye panenge pasisina wekunamata, hautipi zano kuti titange kunamata izvozvi zvatichiri mupenyu?
Kuti ikurumidze kupora kwevarwere vese vane hutachiona pasi rese
Vashoma pasi pe144,078 vanhu vakabatwa nehutachiona hwevane 70,920 vapora uye vamwe vese vachiri kurwa nehutachiona. Patinenge tichinamata, isu tinofanira kunyengeterera izvo zvakabatwa nehutachiona izvo Mwari pachavo vanofanirwa kuvaporesa. Bhaibheri rakatiita kuti tinzwisise kuti Mwari muporesi ane simba, Iye anogona kutambanudza maoko ake uye nekurapa mamirioni avanhu muchidimbu. Vanhu vanokwana kufa nehutachiona, tichave tichinamata Mwari anofanira kuporesa munhu wese anenge akanganisa hutachiona.
Kuchengetedza kwaMwari kune vasina kudzivirirwa
Ndichinamata munamato wekupora nekudzivirira coronavirus, isu tinofanirawo kunamatira kuti Mwari vadzivirire avo vasina kutapukirwa kubva kutapukirwa nehutachiona. The chete nzira isu tiri kushanda sekusimbisa kurwisa hutachiona ndeyekuti hatisati takanganiswa nahwo zvakadaro. Tinofanira kunyengetera kuti Mwari vachiri kumisa hutachiona kuti husapararire uye nekuporesa avo vakanganiswa, maoko ake ekudzivirira anofanira kunge ari pane izvo zvisati zvabatwa.
Rugwaro rwunoti nekuti isu tine chiratidzo chaKristu munhu ngaarege kutambudzika. Tinofanira kunamatira kuti maoko aMwari ave pamusoro peumwe neumwe wedu uye atidzivirire kubva kuhutachiona.
Baba Tenzi, tinouya kuzopesana nesimba rese reCoronavirus muzita raJesu
Tinonamata kuti hutachiona hupere simba hwacho muzita raJesu
Tinoparadza chero nhare yeCoronavirus iri munyika muzita raJesu.
Ishe tinokumbira kuti nesimba renyu, murege kupararira kwehutachiona muzita raJesu.
Ishe nengoni dzenyu, tinokumbira kuti mupe varapi vezvokurapa pese-pese nyika huchenjeri kuti vauye nekurapa muzita raJesu.
Baba vari kudenga, tinonamata kuti nesimba renyu, mufuure chikonzero cheiyi denda rinouraya muzita raJesu.
Rugwaro rwunoti pfungwa dzose dzakanaka dzinobva kwauri Ishe, tinokumbira kuti muvape pfungwa yekuti vapore muzita raJesu.
Baba Tenzi tinonamata kuti murege kufa kwehutachiona hwehutachiona muzita raJesu.
Baba vari kuDenga, tinokumbira kuti nesimba renyu, imi muchavhare kutenderera kwavo muzita raJesu.
Simba rega reCoronavirus rinopazwa muzita raJesu
Isu hatina hanya kana ihwo hutachiona kana kuti hwakarongedzwa nadhiabhori, Jehovha, tinokumbira kuti muporese nyika muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti Kristu wakatora kwaari humwe hweutenda, uye akaporesa matenda edu ese. Tinotaura kupora kwedu kuva muzita raJesu.
Isu tinonamatira murume nemukadzi wese pasi rese rakarohwa nekupukuta kwehutachiona, isu tinonamata kuti muvaporese muzita raJesu.
Bhaibheri rinoti muviri wedu itembere yaMwari, nokudaro, chimwe chinhu chounzenza chingawana nzvimbo matiri. Tinouya kuzopesana nehutachiona mumuviri yavo muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti, Vatorwa vachatya, vachamhanya kwavanovanda? Isu tinoraira Coronavirus kuti ipere kunze kwemuviri wevanhu vakakanganisika muzita raJesu.
Isu tinotema nemvumo yeDenga kuti mugumo wasvika weCoronavirus munyika muzita raJesu.
Dhimoni rega rega reCoronavirus rinopiswa nemoto muzita raJesu.
Isu tinotema chirevo kuti muzita raJesu, iko kodzero yaMwari inopa sununguko inofanirwa kuzorora pamurume wese uye mukadzi akabatwa nechirwere chinouraya muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa, zvichinzi, Tine mucherechedzo waKristu, kurege kuva neanotitambudza. Isu tinotema rusununguko kubva kuCoronavirus muzita raJesu.
Ishe Jesu, tinokumbira kuti mutarise pasi pasi kubva kudenga uye muporese nyika yedu muzita raJesu.
Bhaibheri rinoti neBande rake takapora, isu tinorayira kupora kwedu muzita raJesu.
Tinotaura kusunungurwa kwedu muchokwadi muzita raJesu.
Baba tinokumbira kuti muende kunobva kunowanikwa Coronavirus uye munoparadza simba raro kubva mudzi muzita raJesu.
Ishe Mwari, tinotema chirevo kuti hakuchazovazve nekufa kwakakonzerwa neCoronavirus muzita raJesu.
Isu tinotema chirevo kuti hutachiona hahuzove nesimba pamusoro pehupenyu hwevanhu muzita raJesu.
Nekuti zvakanyorwa kuti iwe unoziva pfungwa dzaunadzo isu, iwo mafungiro ezvakanaka kwete zvakaipa kutipa mugumo unotarisirwa. Isu tinotema chirevo chekuti Coronavirus haachave nesimba pamusoro pedu zvakare muzita raJesu.
Izvo zvakanyorwa, kuti kana chero munhu upi zvake akataura, varega vataure sechirevo chaMwari, isu tinobatana neVatendi vedu uye isu tinorayira zvakafanana kuti hutachiona hucharasikirwa nehutachiona muzita raJesu.
Tinotema kuporeswa kwaMwari Wemasimbaose pamusoro penyika yedu muzita raJesu.
Isu tinotema chirevo kuti kumagumo kwasvika icho muzita raJesu.
Baba nechiremera chedenga, muchajekesa kunzwisisa kwevanachiremba vanozovabatsira kupora muzita raJesu.
Chekupedzisira, tinonamata Ishe, iro bhuku ra2Makoronika 7:14 rinoti Kana vanhu vangu, vakatumidzwa zita rangu vanozvininipisa, vakanyengetera uye vakatsvaga chiso changu, vakatendeuka kubva kunzira yavo yakaipa, ipapo ini ndichanzwa ndiri kudenga ndicharegerera zvivi zvavo uye nekuporesa nyika yavo. Isu tiri vanhu venyu vakaregererwa neropa renyu, isu takadaidzwa zita renyu kuti Lord, tinokumbira kuti muregerere zvivi zvedu uye nekuipa kwenyika. Nyika yedu iri mhirizhonga, kurwadziwa, kutya, uye kufa kwakakonzerwa neakafa coronavirus yaita zvinopfuura kukuvadza kwakakwana kuvanhu vako Tenzi, tinokumbira kuti iwe unzwe minamato yedu kubva kuDenga dzvene uye nesimba roruoko rwako rworudyi iwe ucha tinunurei kubva pachirwere, tinokumbira kuti mupe kupodza kune vakakanganiswa uye muchadzivirira mazana emabhirioni asina kutapukirwa, muzita raJesu. Ameni.
Previous nyayaKunamatira Kune Simba Uye Nyaradzo
inoteveraMapisarema 23 Kunyengeterera Kwekudzivirira Uye Kudzivirira
Mary Kurume 16, 2020 Pa 8: 04 am
Ini ndinotenda zvikuru, nguva yakwana yekutarisa kunaMWARI sa al / xvbnm
Bienvenu Fonkouo Kurume 17, 2020 Pa 8: 52 am
Ndatenda Mwari nekuda kwemasimba uye nemunamato aya mapepa ane chekuita neCoronavirus iri kubata nyika panguva ino. Mwari vakuropafadzei zvakazara Man of God for your wamphamvu mapoinzi mapoinzi
Cece Kurume 28, 2020 Pa 7: 34 am
Ini ndinobatana nekutenda kwangu pamwe nevatendi kuti tinamate tichirwisa iyi coronavirus uye chero imwe nzira yerima inoenda pamusoro penyika yedu. Ndatenda Mwari nemunamato uyu
Daphene Kurume 29, 2020 At 3:51 pm
Ndatenda zvikuru nekuda kwemunamato uyu manamato. Ini ndinobva kuUSA
Yulius junaidi Kurume 31, 2020 Pa 4: 01 am
Tuhan yesus nhengokati
Dan saya ingin membagi di daerah saya banyak yg berkedok menjadi pendoa.tapi mereka jasi masih banyak pake dgn gerakan iblis atau legion.
Bagaimana Cara untuk menghancurkan neRegiyoni Itu
Ogoma Kubvumbi 3, 2020 At 7:18 am
Ndatenda Jesu, zvapera zvechokwadi !!!
Mary Kubvumbi 7, 2020 At 9:44 am
Ndatenda JESU nekuda kwoushumiro uhu hunotisimbisa neshoko rako uye rinotidzidzisa maitiro ekuishandisa. Dai MWARI varamba vachisundidzira hushumiri uhwu kumusoro.
Kuteterera Munamato Usati Waparidza Izwi raMwari
Kunamata Points Kudzima Zvakaipa Kurota